Sababtoo ah bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan-Waxa aniga iigu fiican aniga ma ahan mid kugu habboon。 Bog hordhac ah oo ah 5-20 bixiyayaasha martigelinta webka ee ugu wanaagsan ayaa laga yaabaa inay faa’iido u yeeshaan kuwa isku soo ururinaya liistada dukaamaysiga; Dukaanleyda halista ah ee u baahan inay iibsadaan martigeliyaha shabakadda ASAPwaxay u baahan doonaan faahfaahin dheeraad ah.
liiska dheer ee dib u eegistayada martigelinta、Waxanan doortey shirkadaha ugu fiican martigelinta webka ’10’から：
1 10 Shirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican：長所と短所 & 評決
1.4 7. TMDホスティング
2.3.1 Talo：Ma dooneysaa jawi horumarineed oo gaar ah oo ku saabsan martigelinta la wadaago?
2.5.1 Marti gelinta Websaydhka Shaqsiyeed ee Ugu Fiican：GreenGeeks、Soo dhaweynta、TMD Hosting Sida marti-gelinta qorayaasha、degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa mid la awoodi karo oo si fudud loo isticmaali karo。 Iyada oo aan loo eegin in a y tahay in la daabaco CV-gaaga ama kor u qaadista ‘astaan​​taada shakhsiga ah’-Dhisme si sahlan loo isticmaali karo、astaamaha websaydhka、iyo qiime-dhimista la awoodi kamu aya hihah ahahahah ahahahゲリヤハ・ウェブセイカ. Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet、Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban（$ 0.80 / mo diiwaangelinta）。 TMDホスティングiyo GreenGeeksワックスワックスワックスワックスカーリーああラキインワックスマルティゲリヤデジェロアーンザディドニェンワックス. Marti gelinta ugu Fiican ee Isticmaalayaasha Boqortooyada Midowday：Kinsta、SiteGround Si loo fahmowaxa ka dhigaya websaydhka ugfiican goobta gaar ah、waxaan ubaahanahay inaan ka wada hadalno qarsoodi. Waa Maxay Qarsoodi?
2.6 12. Waxa ugfiican Websaydhada Malaysiya & クワシンガポール
10 Shirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican：長所と短所 & 評決
ダーフルカ：$ 3.99 /月
力：$ 5.99 /月
プロ：$ 13.99 /月
ティルマアモキー：ドメイン無料、kaydinta aan xadidneyn、メールmartigalinta、Auto-SSL、dhisaha bogga jiidista iyo dhicitaanka、90日間のlacag dammaanadああ.
InMotion Hostingwaxaaa aasaasay Sunil Saxena iyo Todd Robinson ee 2001. Shirkadda ayaa hadda haysata saddex xafiis oo Los Angeles、CA、Virginia Beach、VA iyo Denver CO、oo leh xarumaha xogta labada Los Angeles、CA、iyo Ashburn、VA.
Waxay sidoo kale leeyihiin oo ay maamulaan Webホスティングハブwaxaana haatan shaqaaleysiiya shaqaalaha 300 shirkadooda.
InMotion Hosting waa degel websaydh aan shaqsi ahaan ugu hadli karo-Mashruucdayda cusub HostScorewaxaa lagu martiqaaday InMotion VPS aad ayaan ugu faraxsanahaywax qabadkooda.
InMotion Hosting Waxay ku jirtay ciyaarta martigelinta ku dhawaad 20 sano-rikoorkooda ganacsi ee mudada dheer Waxay cadeayen inay yihiin mid ka mid ah bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican suuqa.
Waxyaabo yar oo ka dhigi kara InMotion Hosting ayaa ah midkoodii ugu sarreeyey（taas oo had iyo jeer hela> 99.98％waqtigeedii）いよtaageeradooda macaamiishaああ。 Haddii aad qabtoワックスdhibaato ah amaワックスweydiin、taageerada macaamiishooda had iyo jeerwaxay si deg-deg ah uga jawaabaan.
Marti gelinta gudaha ee gudaha ayaa u fiican shaqsiyaadkaワックスqora iyo ganacsiyada yaryar。 Shirkadaha waaweyn iyo websaydhada leh taraafikada culus-VPS iyo adeegayaasha ku saleysan NJwaxay bixiyaan xal aad u dabacsan.
Waxaa laga aasaasay 2004 koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda。 Xafiisyada Bulgaariya、Talyaaniga、スペイン、Ingiriiska、iyo Mareykanka.
ビロウガ：$ 3.95 /月
ティルマアモキー：Dhismo ku-meelaynta CMS-ga ah、marti-gelinta emaylka、HTTP / 2 La-kartiiyay、Aynu Encrypt Wildcard SSL.
SiteGroundwaxaa lagu aasaasay 2004 by koox ka mid ah saaxiibada jaamacaddaソフィア、ブルガリア。マアンタ、シルカダワックス、マダックスカアテンコニコロフ、レネタツァンコワ、イヨニコライトドロフ.
Shirkadda ayaa tan iyo bilawday inay shaqaaleysiisay dadka 400 xafiisyadooda ku yaallaブルガリア、イタリア、スペイン、イギリス、iyo Maraykanka。 Waxay hadda leeyihiin xarumo xogeed oo 6 oo ku yaala Mareykanka、オランダ、Boqortooyada Midowday、iyoシンガポール.
Shirkad kale oo firfircoon、SiteGround waa mid ka mid ah shirkadaha yar yar ee ku dadaalaya bixinta adeegyo lagu kalsoonaan karo oo leh Waxyaabo cusub.
mid ka mid ah muuqaalkan ayaa ah Super Cacher、oo ah qalab dhisme oo la dhisay oo ka dhigi kara shabakadaha si dhakhso ah u shaqeeya。 Muuqaal kale waa awoodda lagu rakibo Let’s Encrypt SSL oo kaliya dhowr jeer oo fure ah、oo ka dhigaya mid aad ugu sahlan isticmaalayaasha si ay u helaan boggooda.
Kasta oo qiimahooda dib u cusboonaysiinta loo tixgelin karoで、waxaa xaqiiq ah inay u qalmaan tayada martigelinta ee aad soo celiso。 Waxaan u maleynayaa in SiteGround uu ku habboon yahay milkiilayaasha ganacsiga iyo kuwawax qora ee xirfadlayaasha ah ee doonaya xallinta dhibaatada walwalka aan walwalka lahayn.
Waxqabadkaサーバー広告adag-lagu qiimeeyay A dhammaan imtixaanada.
Jawiga deegaanka-300％martigelinta cagaaran（qeybta sare ee warshadaha）.
Isticmaalayaasha kasta oo raadinaya xal marti u ah eco-saaxiibtinimo、初心者、ブロガーshaqsiyadeed、ganacsiyada yar-yar-yar、kuwa miisaaniyada isticmaala、kuwa madaxbanaan、iyo ururada ahay macaash doonka.
Aasaasay 2004、Hostinger waa shirkad martigelisa miisaaniyadeed oo ka shaqeysa xarumo badan oo xogta adduunka ah.
ハル・ワダガイ：$ 0.99 /月
プレミアムラワダーゴ：$ 2.89 /月
ガナッシラワダーゴ：$ 3.99 /月
主な機能：ドメイン無料、dhisaha dhismaha cusub ee cusub、saxan .xyz raqiis ah、qorshaha martigelinta ugu raqiisan.
Hadawaxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee Arnas Stuopelis、Hostingerwaxaa markii ugu horreysay lagu aasaasay 2004 oo ah shirkad "ホスティングメディア" oo ku taalaカウナス、リトアニア。 Dhawr sano ka dib、waxay sidoo kale bilaabeen 000Webhost、adeeg internet ah oo lacag la’aan ah oo aan lahayn xayeesiin.
Inkastoo ay tahay shirkad martigelinaysa、Hostingerwaxay leedahay xarumaha macluumaadka 8 oo ku yaal daafaha aduunka oo dhan iyadoo Singapore ay noqotey ugu dambeyntii。 Waxay sidoo kale ku sugan yihiin wadamada 39 waana diiwaan-galiye shahaadaysan oo buuxa ICANN.
Tan iyo markii la aasaasay、Hostinger ayaa kor u qaaday shirkad furan oo caan ah oo ku faaneysa isticmaalayaasha 2,900万oo leh celcelis ahaan 20,000 cusub ee adeegsadaha cusub maalin kasta dunida oo dhan 2017.
ふらはグスフダ？ Bixinta qiimaha tafaariiqda qiimaha leh ee qiimo jaban（mid ka mid ah kuwa ugu raqiisan suuqa、eeg miiska）dadka isticmaala.
Si fiican u-fiicnaantawaxqabadka ugu wanaagsan eeサーバー.
初心者、boggaga shaqsiyeed、ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah、isticmaaleyaasha miisaaniyada、kuwa madaxbanaan、ururrada aan macaash doonka ahayn、kuwa soo saarta websaydhka esahahahahahahahahahahahahahahahaha ahahahahahahahahaha.
Waxaa lagu aasaasay 2007、TMDホスティングwaxyay dabooshaa dhammaan xalalka martigelinta kala duwan：Shared、Reseller、VPS Cloud、WordPress Managed、iyo Dedicated.
コルシャハビロウガ：$ 2.95 /月
コーシャハビジネス：$ 4.95 /月
Qorshe ganacsi：$ 7.95 /月
ティルマアモキー：ドメインbilaash ah、Weebly diyaar、60 maalin tijaabin lacag la’aan ah、NGINX、Aan Encrypt WildCard SSL、koodh sicir-dhimis gaar ah「WHSR7」.
Iyada oo afar xarumood oo xog ah lagu faafiyay Mareykanka oo dhan iyo xarun xogta dibedda ah oo ku taalアムステルダム、TMDホスティングwaxaa lagu abaalmariyey Xulashada Tifaftiraha PC.
TMDホスティングWaxay bixisaa qorshayaal martigelineed oo kala duwan、oo ay ku jiraan la wadaago、iibiyeyaal、VPS、daruur、WordPress maamushay、iyo adeegyo marti-gelin ah oo heersare ah.
TMDHosting ma ahaワックスhagaagsan laakiinwaxaan ku talinayaa TMD Bogagga loogu talagalayブロガーama ganacsi yar-ilaa-dhexe ah oo u baahan xal marti-gelin web iskuハラインああ。 Kaliya maaha inay bixiyaan bandhigyo xasiloon oo kumbuyuutareed iyo tan oo ah astaamo Waxtar leh、laakiin sidoo kalewaxay leeyihiin qaar ka mid ah kooxda taageerada macaamiisha ugu fiican ee warshadaha.
Haddii aad ka fekereyso Qorshaha Bixinta ee Wadaaga ah、wawaan kugula talin lahaa inaad tagto Qeybta Qorshaha Ganacsiga maaddaama kharashyada dheeraadka ahi ay ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin isku mid（$ 8.95 moaワックスvs $ 9.05 moワックス9。.
Mawduuca wanaagsan-taageerayaasha riixa iyo dib-u-eegista wanaagsan meel kasta.
Soosaarayaasha WordPress、wakaaladaha horumarinta webka iyo suuq geynta、iyo adeegsadayaasha WordPress ee horumarsan.
Waxaa la aasaasay 2007、oo ay leedahay shirkad ay leedahay shirkaddaエクサバイト.
WPムヒイムああ：$ 17 /月
ティルマアモキー：Bog bilaashああ.blogドメイン、HTTP / s & NGINXワキイル、shahaadada SSL bilaashka ah、100 + mawduucyada WP ee bilaashka ah、Jetpack shaqsiyeed / Xirfadlaha ayaa lagu soo daray.
Waxay hadda leeyihiin laba xarumo xogeed oo ku yaal Denver、Co、iyo Singapore si ay u siiyaan xawaare xawli leh oo deg dega Maraykanka iyo Asia Pacific.
WPWebHost waa mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican ee martigaliya ee ku yaalla Koonfur Bari Asia iyo inta ay ku suganyihiin ganacsi tan iyo 2007、Waxay sii wadaan inay bixiyaan qiime macquul ah oo tar targa ga ga uta.
Si kastaba ha ahaatee、xawaaraha jawaab celinta serverka iyo adeegga macmiil la’aanta waa cillado waaweyn oo aad doonaysid inaad tixgeliso ka hor intaadan saxiixin.
Hay’adaha horumarinta webka iyo suuq geynta、adeegsadayaasha martigeliyaasha shirkada、websaydhada waaweyn ee ganacsiga、soosaarayaasha ciyaarta internetka、internetka、dukaanka internetka.
Marka xigta、aan isbarbar dhigno kiisaska adeegsiga ee shirkadahaan martigelinta qiimeynta sare leh.
Ugu Fiican Bogagga Weyn ee Websaydhada：A2 Hosting、InterServer、Soo dhaweynta
Arinka ku saabsan marti-gelinta websaydhka ee la wadaago、badiyaaaba waad ku xaddidan tahay tirada websaydhyada aad ku marti-gelin karto koonto kasta iyada oo ku xidhan qorshaha。 Xisaabaadka martigelinta VPS ma laha xaddidmo domain laakiinwaxaa loo kala soocayaa tirada Kheyraadka uu qorshe kasta leeyahay.
$ 3.95 /月 $ 5.95 /月 11.95ドル/月
$ 2.95 /月 $ 5.95 /月 11.95ドル/月
$ 2.95 /月 $ 4.95 /月 7.95ドル/月
Xusuusin-Kinsta iyo LiquidWeb ma bixiyaan adeegyo marti-gelin wadaag ah.
$ 17.99 /月 29.99ドル/月 $ 49.99 /月
12.95ドル/月 $ 29.95 /月 –
25.00ドル/月 $ 35.00 /月 $ 50.00 /月
Ogeysiis-qorshayaasha martigelinta VPS（ugu dhawaan）faahfaahinta：Heerka gelitaanka-4 GB Ram、75 GB kaydinta; Heerka dhexe-6 GB Ram、150 GB kaydinta;ホルマールああ-8 GBラム、カイディンタ250 GB。 InterServerwaxay leedahay isku-xirnaanta server-ka ugu dabacsanaanta maadaama ay iska leeyihiin / maareeyaan xaruntooda xogtawaxayna bixiyaan xalka martigelinta isku-wareegga.
ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ グローバル 〜500 ms
ダマーンコーシャヤアシャ Turbo（marti gelin wadaag ah）ama ka sareysa ダマーンコーシャヤアシャ グローバル 〜500 ms
ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ グローバル 〜200 ms
ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ マレイカンカ & アーシア 〜700 ms
ダマーンコーシャヤアシャ Kaliya martigelinta WP ee Maareeya ハー・ラアキイン・ウ・バーハン・カーベインタ・ガカンタ 我ら & EU 〜450 ms
ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ ダマーンコーシャヤアシャ
VPS ama kaサリーヤ VPS ama kaサリーヤ VPS ama kaサリーヤ
VPS ama kaサリーヤ VPS ama kaサリーヤ VPS ama kaサリーヤ VPS ama kaサリーヤ
Talo：Ma dooneysaa jawi horumarineed oo gaar ah oo ku saabsan martigelinta la wadaago?
Marti gelinta Node.jswaxay bilaabataa oo kaliya $ 2.70 / A2ホスティングでの月.
Inta badan martigaliyayaasha websaydhadu ma bixiyaanワックスbadan oo ku saabsan habka aaladaha horumariyaha loogu talagalay koontada martigelinta la wadaago。 A2 Marti-gelinta iyo Interserver waa ka-reebitaan naadir ah oo sameeya。 Kuwa raadinaya dhinaca martigalinta VPS、deegaannada badankood waa la habeyn karo.
あんいすくだいの Kaydinta WordPress ee ugu Fiican Adeegsadayaasha Sare：Kinsta、SiteGround
Waxaa jira heerar badan oo adeegsadayaasha WordPress、laga soo bilaabo amateurs-ka ilaa iyo kuwa khibrada u leh inay codeeyaan howlahooda WordPress。 Ogaanshaha tan、martigaliyayaasha websaydhaduwaxay sidoo kale bixiyaan noocyo kala duwan oo ah qorshayaal iyo astaamo u gaar ah WordPress-ka sida qalabka Wax lagu kariyo。 Qorshayaasha loo maareeyay WordPress waa xulasho wanaagsan kuwa doonaya gacan hagis。 Waxaa jira qaar ka mid ah martigaliyayaasha sidoo kale leh khabiiro WordPress ah sida shaqaalaha taageerada.
CompanyMaamulaha WordPressTaageerada Khabiirka WPAstaamaha WordPress ee Gaarka ah
BoldGrid-Bog WordPress dhisay
ステージング、WP-CLI、A2最適化-プラグインgaar ah oo loogu talagalaywaxqabadka ugu fiican
Marti gelinta Websaydha ee ugu Fiican Qorayaasha：GreenGeeks、Soo dhaweynta、TMD Hosting
Tusaale-Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa kaliya $ 0.80 / mo-Waa kufiican kuwa madaxa-bannaan ee u baahan degel deg deg ah.
Qoraayaasha、doorashada marti-geliyaha websaydh ee wakhtiga badbaadiya ayaa ah mudnaanta koowaad。 Dhisme si sahlan loo adeegsado（dhisa oo hagaajiya degel deg deg ah）、websaydh（si aad ula xiriirto macaamiisha iyo daabacayaasha）、iyo qiime qiime jaban（ganacsigaaga aasaasiga ah ayaa waxhia edhi huahi wahihi eda wahihi eda wahihi eda wa hia wa ahia wa hia wa hia wa ahia wa hia wa hia wa hia wa hia wa wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa hia wa wa wa wa wa wa ai awa aa a wa s ya wa wa。。。。.
Tusaale-InterServer ma sarreyso qiimahooda inta lagu jiro cusboonaysiinta.
Milkiilayaasha websaydhaduwaxay ogyihiin in maalgashiga bilowgu uu yahay kaliya qayb ka mid ah qiimahooda guud。タンワクサウサバブアリモカラドゥワンサイダキマハマルティガリンタBixiyeyaasha martigelinta websaydhada badankoodwaxay bixiyaan qiimo-dhimis saxeex ah oo ay adag tahay in laga hor tago。 Si kastaba ha noqotee、qiimayaashu si aad ah ayey kor ugu kacaan markii la gaaro cusboonaysiinta qorshahaaga。 Markaad tirineyso qiimaha suurtagal ee marti-geliyaha websaydhka、maskaxda ku hay tan qayb ka mid ah qorshayntaada.
$ 3.99 /月 $ 9.99 /月 90 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 4.00 /月 $ 4.00 /月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 3.95 /月 11.95ドル/月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 5.95 /月 14.95ドル/月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 2.15 /月 11.95ドル/月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 3.92 /月 7.99ドル/月 Markasta oo lacag dib loo soo celiyo
$ 4.95 /月 7.95ドル/月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 60.00 /月 $ 60.00 /月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 27.00 /月 $ 27.00 /月 100 maalmood tijaabo bilaashああ
$ 29.00 /月 $ 29.00 /月 30 maalmood tijaabo bilaashああ
Marti gelinta Websaydhka Shaqsiyeed ee Ugu Fiican：GreenGeeks、Soo dhaweynta、TMD Hosting
Sida marti-gelinta qorayaasha、degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa mid la awoodi karo oo si fudud loo isticmaali karo。 Iyada oo aan loo eegin in a y tahay in la daabaco CV-gaaga ama kor u qaadista ‘astaan​​taada shakhsiga ah’-Dhisme si sahlan loo isticmaali karo、astaamaha websaydhka、iyo qiime-dhimista la awoodi kamu aya hihah ahahahah ahahahゲリヤハ・ウェブセイカ.
Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet、Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban（$ 0.80 / mo diiwaangelinta）。 TMDホスティングiyo GreenGeeksワックスワックスワックスワックスカーリーああラキインワックスマルティゲリヤデジェロアーンザディドニェンワックス.
Marti gelinta ugu Fiican ee Isticmaalayaasha Boqortooyada Midowday：Kinsta、SiteGround
Si loo fahmowaxa ka dhigaya websaydhka ugfiican goobta gaar ah、waxaan ubaahanahay inaan ka wada hadalno qarsoodi.
U tixgeli sida duulimaadka-Marka isticmaaleyaasha Ingiriisiga ahi ay galaan degel internet ku leh Australia、codsiyadiisuwaxay ka duulaan England-Bariga Dhexe-Aasiya-Australia-Aasiya-Bariga Dhexe-England si ay natiijada ugu soo noqdaan。 Waqtiga duulimaadka ayaa ah daahida shabakadaas.
Haddii boggaas gaarka ah lagu abaabuloイングランド、codsiyadawaxy ku duuli lahaayeen gudahaイングランドoo keliya、iyadoo la yareynayo waqtiga safarka.
Si aad u aragto sida daahfurnaanta ay ugu dhacdo nolosha dhabta ah、waa tan tusaale.
Sannado kahor boggan aad aqrinaysidwaxaa lagu martigaliyay xarun xog ku taal Mareykanka。 Hooswaxaa ku yaal xawaaraha goobta lagu tijaabiyey 10 goobood oo la adeegsanayo Bitcatcha.
Sawirka shaashadda、waxaad ka arki kartaa in waqtiga jawaabta server-ka ay ku kala duwan yihiin meesha iyo meesha。 Goobtu si dhakhso ah ayey ugu dheertahay（8ms）oo loogu talo galay buundada tijaabada ah ee Maraykanka isla markaana tartiib tartiib ah ayey ugudambeysay qeybaha imtixaanka ee Japan iyo Australia（367ms iyo414）.
Meesha u dhaw dhagaystayaashaawawaxy kujirtaa serverkaaga、daahsoonida hoose waa.
Latitude waa qayb gaar ah oo ka mid ah wakhtigaaga soo dejinta boggaaga。 Adoo hagaajinaya daahitaanka（doorashada inaad martigeliso meel u dhow dhagaystayaashaada）、wakhtigaaga websaydhku wuxuu si aad ah u fiicnaanayaa
Si kale haddii loo dhigo、hadii dhagaystayaashaada badankood ay ku yaalliin isla waddanka ama gobol、waadaa ugu wanaagsan in aad martigeliso websaydhka kuugu dhow.
Xubinteyda kooxduwaxay ku sameeyeen falanqaynレイテンシqaar ka mid ah shirkadaha martigeliya xarumaha leh xarumaha xogta ee ku yaal Boqortooyada Midowday oo aan u qiimeeyo iyaga oo ku saleynaya qiimaha、astaamaha、da Aasaaska natiijooyinkiisa imtixaanka、SiteGround-oo leh xarun server-ka fadhigeedu yahay London、waxay ka mid ahayd kuwa martida loo ahaa xawaare sare。 Kinsta、dhinaca kale、waxyay ku shaqeysaa server-yada ay adeegsato Google Cloud ee London（oo tayada xawaaraha si wanaagsan loo xaqiijiyay）.
Web HostLocation LocationResponse Time
SiteGround London さん34 Ms 101
PickAWeb エンフィールド さん35 Ms 104
Internetka Wadnaha リーズ さん37 Ms 126
HostingUK ロンドン、メイデンヘッド、ノッティンガム さん41 Ms 272
Degdeg Deg Deg ah グロスター さん59 Ms 109
tsoHost メイデンヘッド Ms 68 Ms 582
eUKホイガ ウェイクフィールド、メイデンヘッド、ノッティンガム さん34 Ms 634
12. Waxa ugfiican Websaydhada Malaysiya & クワシンガポール